Ama-Archives WAMAKHONANI WAMAKHONANI - Ikhasi 6 kwezingu-7 - AFRIKHEPRI
I-Afrostream, ividiyo entsha ngokufunwayo ngesisombululo sokubhalisele (SVOD). Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokwethulwa ngokusemthethweni, besifuna ukukwazisa ngalesi siqalo saseFrance esizo ...
Umvikeli oqinile wemvelo, usesimweni esingokwemvelo samahektha amane enhliziyweni yehlathi lasePahou, esifundeni sase-Ouidah eBenin, ukuthi uMama uJah ...
ISIVIVINYO ESITSHA E-USA NGIYOBANGANI? UJOHANE CATALINNOTO
Ekupheleni kuka-2014, kwaqhamuka iqembu elisha lezepolitiki e-USA. Lokhu kunyakaza kusekuncane. Kusekuseni kakhulu ukubikezela ukuthi kuzokhula ngokushesha kangakanani ...
Umsunguli wezingubo zohlobo lweMDDia "ubuyela ebhizinisini" ngomqondo omusha omusha. Iphayona leqiniso lezingubo zasemgwaqweni uMohammed Dia, wayengomunye wabantu abayizigidi zokuqala. Uma ...
Isikhathi esisetshenziswe ku-YouTube ngama-Afrika sikhula ngesivinini esikhulu, ngamanani angama-70% ngonyaka. Noma kunjalo isipiliyoni somsebenzisi sihlala sibuthakathaka endaweni yesikhulumi, ngoba ...
NAMUHLA IBHODI LAKHO ROBOT LAKHONA LOKWAKHIWA KWAMAKHONO KANYE NOKUTHOLA ILUNDI LAKHO NGOKULULA EMINYE
Noma ngubani ozonda ukusina nokugoqa izingubo zakhe usevele waphupha ngerobhothi elizobenzela lona. Leli phupho lifezekile selokhu inkampani yakha ...
I-Facebook yona ingena kumncintiswano wokuhlinzeka nge-inthanethi ebanzi kuma-Afrika. Isiqhwaga saseMelika sihlanganyele no-Eutelsat wase-European satellite ophethe le nselelo. "Ngu ...
I-United States, ngentando yeningi esebenzisa isigwebo sentambo
Kulokhu ngo-Okthoba 10, 2011, uSuku Lwamazwe Ngamhlaba lokulwa nesijeziso Sokufa, e-United States, umbuso wentando yeningi ngobukhulu emhlabeni, uphethe umlando ongaziwa. Bahlanganisa ikota ...
Bhalisa kule nkundla futhi udale inethiwekhi enkulu yamasiko, yobungane ne-Afrika (amaKamites) ngosizo oluphathelene, nokwabelana, nokuxhumana phakathi kwamalungu ayo. Ukungena ngemvume, ...
Ikhasinkomba 6 of 7 ngaphambi 1 ... 5 6 7 okulandelayo